January 2021 - ALANZAYAR
ညို့အားပြင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဗလောင်ဆူသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ အကိတ်မလေး မေပန်းချီ…
ညို့အားပြင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဗလောင်ဆူသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ အကိတ်မလေး မေပန်းချီ…. ပရိတ်သတ်ကြီး ရေ မေပန်းချီ ကတော့ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှ တွေနဲ့ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက် တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမ ဟာ နာမည်ရ မင်းသမီးတွေ ထဲကတစ်လက် ဆို […]
စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ မင်္ဂလာဦးည က ဖြစ်ရပ်အကြောင်းစုံ…
စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ မင်္ဂလာဦးည က ဖြစ်ရပ်အကြောင်းစုံ… စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ မင်္ဂလာဦးည က ဖြစ်ရပ်နှစ်ဖက်မိဘ သဘောတူညီမှုနဲ့ အိမ်ထောင်ပြု ကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။လာသမျှလူတွေကို ပြုံးပြရတယ်။သိသိမသိသိ နှုတ်ဆက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီး ပြီးသွားတယ်။စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ ။ ငယ်သူငယ်ချင်း ယောကျာ်းတွေက ‘ခဲဖိုး’ တောင်းတယ်၊ငယ်သူငယ်ချင်း […]
အသားကပ်အင်္ကျီလေးနဲ့ ရင်ခုန်စရာအလှတရားတွေပေါ်လွင်အောင် အမိုက်စားရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ…
အသားကပ်အင်္ကျီလေးနဲ့ ရင်ခုန်စရာအလှတရားတွေပေါ်လွင်အောင် အမိုက်စားရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ…. လှပတဲ့ ကောက်ကြောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှပနေတဲ့ နန်းမွေစံကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားဟာဆိုရင်လည်း အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် ပြေပြစ်လှပနေတာဖြ စ်ပါတ ယ်…။ အ သားအ ရည်ဖြူဝင်းလှပပြီး ပုရိသတို့စွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပေမယ့် ပရိသတ် အ များအပြား […]
ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရှေ့ အဆွေးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို အရောက်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ သိန်းလင်းစိုး
ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရှေ့ အဆွေးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို အရောက်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ သိန်းလင်းစိုး ဂီတလောကမှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာရပ် တည်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် သိန်းလင်းစိုးကတော့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်သီဆိုလေ့ရှိတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ သိန်းလင်းစိုးကတော့ 90 born တွေနဲ့ အတော်လေးရင်းနှီးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ Double Dating အစီစဉ်မှာလည်း အစီစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေ ခဲ့တာပါ ။ […]
ထူးချွန်သော်လည်း မတတ်နိုင်ရှာတဲ့(၅)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်သမီးလေးအတွက်ကျပ်သိန်းတစ်ရာ အလှုရှင်ပေါ်ပေါက်
ထူးချွန်သော်လည်း မတတ်နိုင်ရှာတဲ့(၅)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်သမီးလေးအတွက်ကျပ်သိန်းတစ်ရာ အလှုရှင်ပေါ်ပေါက် သိန်းတစ်ရာ အလှူရှင် ရဲ့စေတနာသမီးလေးရဲ့ ကြိုးစားမှု ကိုအသိအမှတ်ပြုကြပြီ။ သမီးလေးကို အတိုးနဲ့ အကြွေးတင်ခံကျောင်းထားပေးတဲ့ အာဂမိဘတွေရဲ့ အကြွေးတွေဖြေရှင်းဖို့၊အိမ် ကိုပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့၊ မိသားစု အရင်းအနှီးအတွက် သိန်း (၅၀)၊ အလှူရှင်ပေါ်သော်လည်း ကလေးအတွက်လိုလေသေးမရှိ စေရန် အတွက် ဘဏ်တွင် သိန်း(၅၀) အပ်နှံပေးမည် […]
လုံးကိတ်နေတဲ့ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းတွေ နဲ့ ပုရိသတွေ ရင်ခုန်အောင် ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း…
လုံးကိတ်နေတဲ့ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းတွေ နဲ့ ပုရိသတွေ ရင်ခုန်အောင် ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း… သွယ်လျ တင်းကိတ်နေတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ကို တော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုတော့ပါဘူး နော်။… သူမက တော့ မော်ဒယ်လ် လောကထဲကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေး […]
တိုက်နဲ့ပဲ နေနေ၊ တဲနဲ့ပဲ နေနေ ဒါတွေ လုံးဝမလုပ်မိကြပါစေနဲ့နော်
တိုက်နဲ့ပဲ နေနေ၊ တဲနဲ့ပဲ နေနေ ဒါတွေ လုံးဝမလုပ်မိကြပါစေနဲ့နော် လူတိုင်း လူတိုင်း အိမ်မှာ ဒါမျိုးတွေ လုံးဝ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့။ (တန်ဖိုးရှိတဲ့ သိမှတ်စရာတွေပါ) အိမ်၌မပြုသင့်မထားသင့်သော ရှောင်ရန်များ သင်သိပြီးရင် မျှဝေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော် ၁။ အိမ်ရှေ့၌ငှက်ပျေားပင်မစိုက်အပ်။ ၂။ရေစိုအဝတ်များကိုညအချိန်သစ်ပင်ပေါ် အဝတ်တန်းပေါ်မထားရ ၃။ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအပြောဆိုမကြမ်းရ ၄။လက်ဖက်သုတ်စားပြီးကလေး၏ […]
လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်း (၂) မျိုး ၁။ ပုဗ္ဗသန္နဝါသ – ရှေ့ဘဝ၊ ဘဝ မှ လင်မယားဖြစ်ခဲ့ရဖူးသောကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။၂။ ယခုဘဝတွင် တစ်ဦး၏အကျိုးကို တစ်ဦးက စေတနာအပြည့်နှင့် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်းကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ အောက်ပါအချက်များနှင့် တူညီတဲ့ အကြင်လင်မယားဖြစ်ပါကသမ္မသဒ္ဓါ – သဒ္ဒါတရားချင်းတူညီသမသီလာ – […]
ချစ်စရာကောင်းပုံစံလေးနဲ့ “မျက်ဝန်း ကို ပိုချစ်ပါ” ဆိုပြီး အထာကျကျ ပိုစ့်တွေပေးနေတဲ့ မော်ဒယ် မျက်ဝန်း ရဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်များ
ချစ်စရာကောင်းပုံစံလေးနဲ့ “မျက်ဝန်း ကို ပိုချစ်ပါ” ဆိုပြီး အထာကျကျ ပိုစ့်တွေပေးနေတဲ့ မော်ဒယ် မျက်ဝန်း ရဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်များ မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ် […]
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ မထင်မှတ်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ မထင်မှတ်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေးNews.AU မှ ဖော်ပြချက်အရ အသက်၂၁နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေး တစ်ဦးမှာ ခေါင်းကိုက်ကိုက် နဲ့ညအိပ်ယာဝင်သွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက် မှာတော့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် ဆိုပြီး ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုးကားဖော်ပြပေးလိုက် […]